Bhuti disk rakazara paMac? Tricks yekusunungura nzvimbo! | Ndinobva mac
Semutemo wenguva dzose, vashandisi vanofanirwa kuchengeta zvinhu zvakawanda, neupenzi hwekuti ndingangozvida rimwe zuva, kusvikira nguva yasvika kana Zvakanaka, iwe fambisa imba woenda kunogara mune yekuchengetera Kana iwe unotanga kurasa zvese zvawaifunga kuti uchazoda rimwe zuva asi mushure memakore akati wandei wakazoona kuti zvaive zvisina maturo zvisina maturo.
Kana tikataura nezveedu zvakaoma, nyaya yacho yakafanana chaizvo. Pane kanopfuura kamwe chiitiko, gwaro, mufananidzo kana vhidhiyo yakapihwa isu uye isu takaikopa kukombuta yedu nechinangwa chekunakidzwa chinyararire, asinenguva tinokanganwa uye inowira mukukanganikwa kusvika pakupedzisira iri rimwezve faira iro riri kutora zvisina basa kutora nzvimbo pane yedu Mac.
Asi chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwatiri nemifananidzo kana mavhidhiyo atinotora kubva paInternet, asi kunyanya nemavhidhiyo mavhidhiyo. Mumakore achangopfuura, saizi yerudzi urwu rwevhidhiyo yanga iri kutenderera 2 GB, nzvimbo inogona kupihwa pasina matambudziko pane yedu hard drive, kana paine maviri kana matatu mafirimu, asi kana tikatanga kuburitsa kurudyi uye tikasiya zvese zvinowira mumaoko edu, yedu huru dhiraidhi ichave tangle yemafaira asina basa ayo nekufamba kwenguva anozokanganisa mashandiro eMac yedu.
Mune chero sisitimu yekushandisa, zvinogara zvichikurudzirwa kuve neinosvika 10% yemahara nzvimbo kuitira kuti iyo system ishande zvirinyore isina kuratidza matambudziko ekuita. Uye OS X haisi iyo yega. Kana tikacherekedza kuti yedu Mac anotanga kufunga zvinhu kanopfuura kamwe chete, isu tichafanirwa kutarisa nzvimbo yekuchengetera uye kuti inogoverwa sei kuti uwane pfungwa yekuti kwatinofanira kupfuudza mutsvairo. Kuti uite izvi, tinya pane Apple menyu > Nezve iyi Mac> Ruzivo rwakawanda> Kuchengetedza.
Menyu iyi inotiratidza mashandisiro atakaita nzvimbo paMac yedu: mavhidhiyo, zvinoshandiswa, mapikicha, odhiyo uye nezvimwe. Sezvauri kuona mumufananidzo uri pamusoro, yakawanda yedhiraivho mavhidhiyo anoteverwa neiyo isingazivikanwe inonzi Vamwe, iyo inogara ichinetsa kwazvo kuziva uye dzimwe nguva isingagone. Mune ino kesi, zviri pachena kuti kana ini ndichifanira kugadzira nzvimbo paMac yangu ndichafanirwa kubvisa chikamu chakakura cheaya mavhidhiyo, kungave nekuateedzera kune yekunze dhiraivha kana kuadzima kana ndisingade .
1 Sunungura nzvimbo pane yako Mac hard drive
1.2 Fambisa ruzivo kune ekunze madhiraivha akaomarara
1.3 Delete maapplication atisingashandise
1.4 Bvisa pre-yakaiswa mitauro
1.5 Chii chandinoita nenzvimbo inogara "Vamwe" pane yangu Mac?
1.6 Ongorora saizi yemafaira pane yako hard drive
1.7 Bvisa kubhurawuza nhoroondo
1.8 Bvisa cache yemabhurawuza atinoshandisa
1.9 Delete faira rekare
1.10 Tsvaga zvakapetwa mafaera
1.11 Tarisa iyo Downloads folda
1.12 Bvisa marara
1.13 Chinja hard drive
1.14 Manage chengetedzo kuburikidza neMacOS Sierra
Sunungura nzvimbo pane yako Mac hard drive
Imwe yemabhenefiti mazhinji ayo OS X inotipa tichienzaniswa neWindows, ndeyekuti kubva muchikamu cheSecurity chatinogona kuona nguva dzese nderupi rudzi rwemafaira rwuri kutora nzvimbo yakakura pane yedu hard drive, kuitira kuti kana isu tese mafaera edu akarongeka zvakanaka, tinokurumidza kukwanisa kugadzirisa nekukurumidza matambudziko epakati ari kukanganisa yedu yakaoma drive.
Kunyangwe iwo maazvino vhezheni eese ari maviri iTunes uye iTunes ari kuita kuti zvive zvisina basa kubatanidza zvishandiso zvedu kuMac kwechingangoita chero chinhu, nguva dzose isu tinofanirwa kuibatanidza kuti iite backup yemudziyo wedu, ingave iyo iPhone, iPad kana iPod touch, backup iyo ichauya inobatsira kana tiri kuenda kujeri kupaza chishandiso chedu kana kana tichizomutsidzira kune yazvino vhezheni yeIOS kubvira panguva yekuita chimwe chinhu chingatadza uye isu tichafanirwa kudzoreredza chishandiso kubva pakutanga uye kudzorera iyo backup neese maapplication uye ruzivo rwataive takachengeta mariri.
Kana isu tine zvishandiso zvakawandisa, ma backups aya anogona kutora mashoma magigabytes. Kana, sekutonga kwese, isu tisingawanzo gadzira yakachena yeimwe neimwe vhezheni yesisitimu inoshanda iyo Apple inotanga gore rega, asi kungozvivandudza, zvingangoita kuti mumakore, michina yakati wandei yakapfuura nemaoko edu uye makopi chengetedzo eiwo anoramba achichengetwa muTunes. Backup yega yega inogona kutora mashoma magigabytes, gigabytes atinogona kukurumidza kusunungura nekuwana macopy makopi uye kubvisa backup yemidziyo iyo isisiri patiri.
Kuti tiite izvi tinofanirwa kutanga tavhura iTunes uye mune yepamusoro menyu iTunes tinya pane zvaunofarira. Tevere tinoenda kune Midziyo. Muchikamu chino tichawana makopi ekuchengetedza emafaira edu. Kana tikawana chero izvo zvisisinesu isu tinongofanira kudaro tinya pairi uye sarudza Delete backup.
Fambisa ruzivo kune ekunze madhiraivha akaomarara
Parizvino eMutengo wekunze kwekutyaira kwakadzika wakaderera zvakanyanya mumakore achangopfuura, uye parizvino tinogona kuvapinza isingasvike zana euros, mune masimba anopfuura 100 TB. Iyi inogara iri mhinduro yakanakisa kana iwe uchida kugara uchishanda nemafaira makuru nekuda kwebasa rako uye mavhidhiyo aunogona kudzima.
Iyo yakanaka inogara iri yekuvaendesa kune yekunze dhiraivha kana tarega kushanda navo uye tinoziva kuti kwenguva yakareba hatizovada, nekuti kana zvisina kudaro chinhu chedu chatichaita kana tikavaendesa mberi kwenguva kutambisa nguva yakawanda tichiateedzera kubva kuchikamu chimwe kuenda kune chimwe.
Kazhinji dhiraivha yekunze yakaoma yakasimba, kwete SSD, saka kushanda zvakanangana nekutyaira kwekunze kunogona kutora nguva yakareba Kunyangwe izvo zvatinoda kuita zvidiki zvekare asi izvo zvinotimanikidza kutumira vhidhiyo rese zvakare, muchiitiko chekuti isu tinoshanda nerudzi urwu mafaera. Kana, kune rumwe rutivi, tichishanda zvakanyanya nemifananidzo, tinogona kuzvigadzirisa pasina dambudziko zvakananga kubva kune yekunze dhiraivha, kunyangwe zvikatitorera mashoma masekonzi.
Este huipi hwekupedzisira hweyese system yekushandisa. Iyo mania yekurodha pasi mafomu kuyedza kuona zvavanoita nekufamba kwenguva zadza hard drive redu nezvisina basa maapplication atisingazomboshandisa zvakare, nekuti chikonzero chikuru chekurodha pasi kwaive kutora mukana wekupihwa kana kutarisa kana zvaive zvakakosha zvinangwa zvedu.
Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kuvhura iyo Launcher uye enda kune iko iko icon icon. Ipapo isu tinongofanirwa kuhudhonza kuTrash kuti tibvise iyo kubva kuMac yedu.kana isu tinogona kuvhura iyo Tsvaga, sarudza iyo Folda yeApplications kubva kurudyi mbiru uye dhonza application yatiri kuda kudzima kuTrash. Iyi nzira inobatsira kana tichida kudzima maapplication anga atorwa pasi zvakananga kubva kuMac App Store, asi hazvibatsire kumashandisirwo atakatora kubva paInternet.
Mune ino kesi isu tichazoda maapplication anotibvumidza kudzima chero application kubva kuMacZvikumbiro zvisingawanzo kuwanikwa muMac App Store asi isu tinofanirwa kuenda kune vatatu-bato vanogadzira. MuMac App Store tinokwanisa kuwana Dr Cleaner application inotibvumira kusunungura kunyorera uye mashandiro ayo ari nyore, asi dzimwe nguva haishande sezvainofanirwa. Kunze kweMac App Zvimwe zvinoshandiswa AppZapper y AppCleaner ndeavo vanopa zvakanakira mhedzisiro kana uchibvisa chero chikumbiro.
Bvisa pre-yakaiswa mitauro
Semutemo wakajairika, shandisa chete mutauro mumwe chete paMac yedu, asi kana tichida kuichinja, Apple inoisa mitauro yakawanda kana tichida kushandura mutauro. Iyi mitauro inogara pakati pe3 ne4 GB, inzvimbo yakakosha zvekuti kana tikashomeka padhigodhi pane yedu hard drive uye pasina nzira yekuburitsa imwe nzvimbo kubva kune zvimwe zvikamu, inogona kuve yakakosha chaizvo. Kune izvi isu tinofanirwa kutendeukira kune iko kunyorera monolingual, chikumbiro chakanyatsogadzirwa kubvisa mitauro yatisingashandise uye hatina kuronga kuishandisa mune ramangwana uye nekudaro kukwanisa kudzosera mashoma GB ekuchengetedza.
Chii chandinoita nenzvimbo inogara "Vamwe" pane yangu Mac?
Pamusoro takurukura sarudzo yakapihwa neAne About iyi Mac mashandiro maanotiratidza iwo akasiyana marudzi emafaira atinayo pane yedu hard drive. Iyo inotitsamwisa zvikuru ndiyo nguva dzose inonzi "Vamwe" pamusoro pezvose apo inobata yakakosha chikamu chedu hard drive. Ichi chikamu chinosanganisira mamwe mafaera asingakwanise kuiswa muzvikamu. Semutemo wenguva dzose, iyi dhairekitori inosanganisira:
Zvinhu zviri muOS X mafolda akadai seSystem folda uye mapakeji.
Ruzivo rwemunhu wega senge karenda data, kutaurirana uye zvinyorwa.
Kuwedzeredzwa kana ma module ekushandisa.
Multimedia mafaera ayo Inotarisa yekutsvaga injini yaisagona kupatsanura senge seaya ari mukati mehomwe.
Ese mafaera ane kuwedzerwa kusingazivikanwe neSpotlight.
Mune zviitiko izvi, pane zvishoma zvatingaite, nekuti mafaera aya kazhinji haawonekwe mumaforodha atinoshandisa kazhinji. Kana isu tichida iyo nzvimbo yairi kutora yakakosha chaizvo, isu tinofanirwa funga nezve mukana wekuomesa hard drive uye woita yekumisikidza yakachena zvakare, pasina makopi ekuchengetedza ayo anogona kudhonza aya mafaera akarongwa se "Zvimwe"
Ongorora saizi yemafaira pane yako hard drive
Dzimwe nguva dambudziko rekuchengetedza pane redu rakaomarara dhizaini rinogona kuve rakajeka kupfuura isu zvatingafunga. Tingave nefaira, remhando ipi neipi, iri kutora nzvimbo yakawanda kupfuura zvakajairwa, kana dhairekitori iro rinofungidzira rinotora huwandu hunoshamisa hwegigabytes. Kugona kuongorora zvese zvirimo mu hard drive yedu uye pamwe tsvaga mhinduro nekukurumidza kumatambudziko edu ekuchengetedza tinogona kushandisa Disk Inventory X, chishandiso chinoongorora yedu yese hard drive ichitiratidza nzvimbo inogara folda yega yega kuitira kuti tikurumidze kukwanisa kuwana dambudziko rinogona kunge riine nzvimbo pane yedu hard drive.
Iwe ungofanire kufunga maforodha atinowana mukati meVashandisi folda, ndiko kwatino chengetera ruzivo rwese. Mamwe maApplications, MaSystem ... maforodha ndeechirongwa uye hatifanire kuvapinza chero nguva kuti tirege kuzopedzisira takonzeresa kukundikana kukuru muchirongwa chinotimanikidza kudzorera sisitimu inoshanda zvakare.
Bvisa kubhurawuza nhoroondo
Iyo yekutsvagisa nhoroondo ingori zvinyorwa, pasina chero fomati, saka saizi iyo yainogona kutora paMac yedu inenge isina basa. Iyi sarudzo inokurudzirwa kana tiri kunetsekana patinorodha peji mubrowser uye isu hatigone kuwana iyo yakagadziridzwa data kuti iratidzwe.
Bvisa cache yemabhurawuza atinoshandisa
Kusiyana nenhoroondo yekubhurawuza, cache inogona kutora chikamu chakakosha chedu hard drive, sezvo iwo ari mafaira anomhanyisa kurodha kwemapeji atinowanzo tarisa, kuitira kuti iwe ugoisa chete iyo data iyo yachinja, sezvazvinowanzo kuve zvinyorwa, kwete iyo peji rese, iro rakachengetwa mune cache yedu browser. Kuti tiite basa iri nekukurumidza uye mumabhurawuza ese tinogona kushandisa mashandisiro akaita seCleanMyMac, ayo mumasekondi mashoma anobvisa chero masara kubva kune cache yemabhurawuza edu.
Delete faira rekare
MaFaira echinguvana ndeimwe yezvakashata zvakaipa zveese mashandiro. Hapana anoshanda system natively anotipa otomatiki system iyo yakakumikidzwa kudzima nguva nenguva kudzima idzi mhando dzefaira dzatinongoshandisa chete kamwe, kunyanya patinogadziridza iyo yekushandisa system kune imwe nyowani, yakagadziridzwa vhezheni Nekufamba kwenguva, mafaera aya anotora nzvimbo yakawanda paMac yedu uye nekuadzima tinogona kuwana yakawanda nzvimbo pane yedu hard drive.
Kuadzima, tinogona kushandisa zvinoshandiswa zvakadai seKachenaMyMac, iyo yatakambotaura mundima yapfuura uye inotibvumidzawo kudzima cache uye nhoroondo yemabhurawuza ese atinoshandisa paMac yedu. Chimwe chikumbiro icho zvakare inotibvumidza kuti tikurumidze kudzima aya marudzi emafaira ndi Dr. Cleaner kubva kumugadziri TREND Micro
Tsvaga zvakapetwa mafaera
Dzimwe nguva zvinogona kuti titore mafaera, mabhaisikopo kana mimhanzi izvo zvatove paMac yedu kanopfuura kamwe uye kuti tinozvichengeta mune mamwe maforodha, tichitenda kuti isu hatina pairi pane yedu hard drive. Nekufamba kwenguva zvakapetwa mafaira vanogona kuve hope chaidzo pane yedu hard drive nekuda kwehukuru hukuru hwavanogona kutora. MuMac App Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuwana uye kudzima mafaera akateedzana anowanikwa pane yedu Mac.
Tarisa iyo Downloads folda
Dhawunorodha dhairekitori ndiyo nzvimbo panochengeterwa mafaera ese atinotora kubva internet. kungave kuburikidza nekushandisa p2p kana kuburikidza nekutumira mameseji, email kana chero imwe mhando. Semutemo wenguva dzose, kana tangotora faira ratinoda, tinowanzo riendesa kufolda kwatinoda kuichengeta, kana iri application, tinoiisa nekukurumidza. Mune ino kesi, zvinonyanya kuitika kuti isu tinozokanganwa kudzima application yatakatora pasi uye inotora yakakosha nzvimbo yeedu hard drive.
Kunyangwe zvingaite senge zvisina musoro, vazhinji ndivo vashandisi vanokanganwa nezve marara, iyo nzvimbo iyo yatinotumira mafaera ese atinoda kubvisa zvachose kubva ku hard drive yedu. Asi hadzina kunyatso kubviswa kudzamara tadziisa zvachose saka mushure mekuita zvakazara kuchenesa kwemafaira asina basa kubva ku hard drive yedu, zvinokurudzirwa kuiburitsa zvachose kana tichinyatsoda kutarisa kuti ingani nzvimbo yatinenge tasiya pane yedu hard drive, kana tichifanira kuramba tichichenesa kana isu ndawana nzvimbo yakakwana kuti ndikwanise kudzikama tidzokere kubasa neMac yedu pasina matambudziko epanzvimbo kana mashandiro.
Chinja hard drive
Kunyangwe zvingaite senge mhinduro isina musoro, kana dhiraivha yedu ikava diki pane shanduko dzekutanga tinofanirwa kunge tichifunga nezvekuwedzera nzvimbo yayo yekuchengetera. Izvo zvakanaka ndezvekuti chinja icho cheSSSD iyo inotipa isu inokurumidza zvikuru kunyora uye kuverenga nekukurumidza kupfuura echinyakare 7.200 rpm yakaoma dhiraivha. Mutengo weaya madhiraivha akaomarara wadonha zvakanyanya mumwedzi ichangopfuura uye isu parizvino tinogona kuwana masimba e500 GB kweanopfuura zana maeuro.
Asi kana iwo ma500 GB achiratidzika kunge madiki uye isu tine mari yekushandisa pane 1 kana 2 TB SSD, aya mamodheru anodhura zvakanyanya kupfuura echinyakare madhiraivha akaomarara, tinogona kuita yakakosha mari yekugadzirisa mashandiro uye nekuwedzera kuchengetedza. Asi kana hupfumi hwedu husina kunyanya kusimba, isu tichafanirwa kutora 500 GB imwe uye titenge zvekutyaira zvekunze zvechinzvimbo chatinoda, kuti tigare tiine mafaira ese atinofanira kubvunza nguva nenguva asi isu tinofanirwa kuve nawo nekukanya mbeva. Uye zvakare, iyo imwechete unit inogona kushandiswa kugadzira makopi neTime Machine uye isu tinouraya shiri mbiri nedombo rimwe.
Manage chengetedzo kuburikidza neMacOS Sierra
Imwe yezvinhu zvitsva izvo macOS Sierra yakatiunzira, kunze kwekushandura zita reOS X kuva macOS, ndiye maneja wekuchengetedza, uyo unotibvumidza mumasekondi mashoma tarisa kuti ndeapi mafaira atinogona kudzima nekuda kwezera ravo, nei tisingashandise, nekuti iwo akafanana... Iyi sarudzo mune dzidziso yakanaka kwazvo asi semamwe mafomu anovimbisa kuita zvakafanana, unofanira kungwarira navo uye usavimbe navo zvizere, sezvo ichigona kuchenesa zvine hutsinye pane redu rakaomarara pasina kutiratidza izvo mhando yemafaira inoronga kudzima kuti uwane imwe nzvimbo pane yedu hard drive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Matipi ekuwedzera yako disk nzvimbo paMac
Ini ndinodzima mavhidhiyo angu ese achipinda zvese zvinyorwa, zvisinei kana ini ndikatarisa kuchengetwa kwebhuot disk kunoonekwa kuti vanoramba vachigara munzvimbo yangu yese, vari kuchengetwa kupi? kana kuti ndinoadzima sei kubva kubhuti disk
Chaizvoizvo chinhu chimwe chinoitika kwandiri, ndakabvisa mavhidhiyo ese kubva kuPHOTOS app yaive yakafanana nechimwe chinhu 900, uye zvichiri zvishoma pasi pechaigara. ipapo ndakayeuka iyo iPhoto app yandichiri kuisa uye ipapo ndaive nemifananidzo yakawanda nemavhidhiyo, ndakadzima kubva ipapo uyezve kubva kuPhoto marara uye mushure memarara kubva padoko. uye ipapo yatove yemahara yakakwana, asi kunyangwe zvakadaro ini ndinoramba ndichigara mune zvimwe uye handisisina zvimwe zvekutarisa Ini ndadzimawo mavhidhiyo kubva kudropbox folda yeGoogle drive. Mazano andipera.
ona kana vachigona kutibatsira.
Ini ndadzima mawebhusaiti nemaapps andinogona kufunga nezvawo anogona kuchengeta mavhidhiyo andakamboshandisa kare senge mapikicha, iPhoto, dropbox, googledrive, ... asi kunyangwe zvakadaro ini ndichine akawanda maGG anotora ndangariro dzekutangisa disk .
Pane chero munhu angandibatsira ???
Mhoroi, ndine iyo Sierra yakaiswa pane yangu mac pro… ndakaisa faira kuICloud uye ndadzima kubva kumac faira randinoda kumhanyisa chirongwa… ndinoedza kurodhaunirazve asi rinondiudza kuti handina dhisiki nzvimbo…
Ini ndanga ndatoteedzera nhanho dzese uye ndadzima mapurogiramu uye mafoto kubva kumac asi ini ndichine dambudziko repadenga ...
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri nenyaya yemavhidhiyo, ini handina imwe uye inoti ini ndine 20GB.Iyi mhinduro iriko pane izvi?
Pindura kuna elizabeth
Apple inotanga kuhaya vashandi veXNUMXth Apple Store muJapan